Nin Hubeeysan Goordhaw Magaalada Muqdisho Lagu Dilay (Daawo)
Ciidamada amaanka dowlada Soomaaliya ayaa goordhaw agagaarka Taalada Daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho waxa ay ku dileen nin hubeesan, iyagoo sidoo kale la sheegay in ciidamada qabteen rag kale oo la tuhmayo.
Goobjooge ayaa noo sheegay in sadex nin oo la socotay Mooto nuuca Fikon loo yaqaan rasaas lagu furay, waxaana goobtaasi ku dhintay mid kamid ah sadexdaasi nin oo la sheegay in uu biskoolad heestay halka labada kalana gacanta lagu dhigay.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in ninka la dilay iyo labada nin ee la socotay ay doonayeen in ay dil geestaan , waxaana rasaas ku furay ciidamada amaanka oo ka shakiyay .
Ciidamada amaanka ayaa mudo daqiiqado ah goobta ku hayay ninka hubeesan ay dileen iyo sidoo kale labada nin ee xireen, waxaana wararka an heleyno sheegayaan in raga la qabtay iyo ninka la dilay loo qaaday xarunta CID-da.
Laamaha amaanka ayaan wali ka hadlin dilkan goordhaw ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan taalada Daljirka Dahsoon, waxaana la filayaa in laamaha amaanka faah faahino ka bixiyaan dilkan iyo sidoo kale raga kale ee la qabtay.
Previous Madaxweyne Farmaajo Iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada Oo Shir Uga Socda Garowe
Next (Akhriso) Qodobo Ka Soo Baxay Shirkii Madaxweyne Farmaajo & Madaxda Dowlad Goboleedyada
4 Arrested In 2016 Shooting Death Of Toronto Man (8,001)
Dagaal Xogan oo Saakay ka Socda Gobolka Galgaduud (859)